I-Des Moines, IA • Ukuhlikihlizwa komzimba ne-NuRu Massage
IDes Moines iyinhloko-dolobha nedolobha elinabantu abaningi esifundazweni sase-Iowa i-US. Futhi kuyisihlalo sesifunda sePolk County. Ingxenye encane yedolobha ifinyelela eWarren County. Yafakwa ngoSepthemba 22, 1851, njengeFort Des Moines, eyayifushaniswa ngokuthi “Des Moines” ngo-1857. Ungabi nesithukuthezi futhi ukhathele eDes Moines, IA. Bhuka i- inkanuko ye-nuru massage.